ကြည်းတပ်ပိုးကောင်များ - ဥယျာဉ်တော်ပိုးမွှား
ကြည်းတပ် Worm ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Army Worms အမျိုးအစားများ
ကြည်းတပ် Worms ၏ဘဝသံသရာ
အော်ဂဲနစ် Armyworm ထိန်းချုပ်ရေး
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Armyworm ထိန်းချုပ်ရေး
ကြည်းတပ် Worms ကာကွယ်ခြင်း
မေး။ ။ စစ်တပ်ပိုးကောင်တွေကဘယ်ကလာတာလဲ။
မေး။ ။ စစ်တပ်ပိုးကောင်များသည်နေ့အချိန်တွင်ပိုးရွများလား။
သငျသညျအစဉျအမွဲစစ်တပ်ပိုးကောင်များအားဖြင့်ဖြိုဖျက်အပင်တစ်တန်းစောင့်ကြည့်ဖူးလျှင်, သင်သည်သူတို့၏အမည်ကိုဘယ်လိုရတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုငါသိပါလိမ့်မယ်။ ဤကျိုင်းကောင်ကျိုင်းကောင်များသည်စက်ရုံတစ်ခုလုံးကိုမျိုချပြီးနောက်တစ် ဦး သို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောင်းသွားကာ၎င်းကိုတူညီသောသန်စွမ်းမှုနှင့်အတူမျိုချလိုက်မည်။
ဒါပေမယ့်ကြည်းတပ်ကောင်ဆိုတာဘာလဲ။ မတူကွဲပြားတဲ့အရာများရှိပါသလား။ သူတို့ဘာစားကြတယ်။ စစ်တပ်ပိုးကောင်များဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ အရေးအကြီးဆုံးကတော့စစ်တပ်ပိုးမွှားတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဤအရာအားလုံးကိုယခုဆွေးနွေးမည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဒီမွဲပိုးမွှားနှင့်သင်တို့၏ခြံထဲမှာဘယ်လိုသုတ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုငါပေးမည်။
ရိတ်သိမ်း - ကိုယ်ရံတော်ရေပေါ် Row အဖုံးများ
ဘုံအမည် (များ) ဘုံကြည်း၊ စစ်စစ်သည်၊ စစ်မြင်းဖြူ၊ အဖြူရောင်ပိုးရွ၊ မြောက်ပိုင်းစစ်တပ်ပိုးကောင်၊ အရှေ့တိုင်းစစ်တပ်ကောင်။ kommandowurm, nutgrass armyworm, တောင်ပိုင်း armyworm
သိပ္ပံပညာအမည် (များ) Spodoptera exempta, Spodoptera exigua, Spodoptera eridania, Spodoptera frugiperda, Spodoptera mauritia, Mythimna unipuncta, Mythimna separata
မူလ မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်ဒေသများ
ထိခိုက်သောအပင်များ alfalfa, artichoke, ကညွတ်, ထောပတ်သီး, မုယောစပါး, ပဲ, beets, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း, ဂေါ်ဖီထုပ်, မုန်လာဥ, ပန်းဂေါ်ဖီ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, Citrus, cole ကောက်ပဲသီးနှံများ, collards, ပြောင်းဖူး, ဝါဂွမ်း, cowpeas, သခွားသီး, ခရမ်းချဉ်သီး, ကြက်, ဆလတ်, ပြောင်း, ပြောင်း။ , မုန်ညင်း, အခွံမာသီး, Oats, ရုံးပတီ, ကြက်သွန်, parsley, ပဲ, မြေပဲ, ငရုတ်ကောင်း, အာလူး, rapeseed, ဆန်, ကောက်, နှံစားပြောင်း, ပဲမျိုးစုံ, ကြံ, နေကြာ, အာလူး, ဆေးရွက်ကြီး, ခရမ်းချဉ်သီး, မုန်လာဥ, ကတ္တီပါပဲ, ဖရဲသီး, ဂျုံ။ များစွာသောပန်းမျိုးစိတ်များနှင့်ရိုင်းသောမြက်များ
ဘုံကုစား Bacillus thuringiensis var ။ Kurstaki မှုန်ရေမွှားသို့မဟုတ်အမှုန့်များ, azadirachtin မှုန်ရေမွှား, spinosad မှုန်ရေမွှား, neem ရေနံအဖြစ်ဟော်ရီကာချာဆီ, အကျိုးရှိသောအင်းဆက်ပိုးမွှားများကဲ့သို့သောအင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ lacewings များ၊ ရေပေါ်အတန်းအဖုံးများသည်ကြက်ဥတင်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး diatomaceous earth သည်ပိုးမွှားများအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
စစ်တပ်ပိုးကောင်များအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ငါအသုံးအများဆုံးစစ်တပ်တီကောင်အမျိုးအစားခုနစ်ခုကျော်သွား။ သူတို့အကြားကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
Mythimna unipuncta, 'အဖြစ်များသော Armyworm' ။ ရင်းမြစ်: အမှားလမ်းညွှန်
ပုံမှန်အားဖြင့်အစိမ်းရောင်ရှိသည့်အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အညိုရင့်ရောင်အရောင်ရှိပြီးများသောအားဖြင့်တပ်မတော်တီကောင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်ရှည်လျား။ မှောင်မိုက်အစင်းများရှိသည်။ ၎င်း၏ပိုးဖလံသည်အဖြူရောင် - အစက်များဖြင့်ပိုးဖလံသည်အတောင်များ၏အပြင်ဘက်တွင်အဖြူရောင်အစက်အပြောက်များရှိပြီးအတောင်များ၏အလယ်တွင်၎င်းကို၎င်း၏အမည်ပေးသောအဖြူရောင်အစက်အပြောက်များရှိသည်။ ယင်းတို့ကိုမြောက်အမေရိက၊ အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်အမေရိကတို့တွင်သာမကဥရောပတောင်ပိုင်း၊ အာဖရိကအလယ်ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းဒေသများတွင်တွေ့ရသည်။
Mythimna separata၊ 'မြောက်ပိုင်းကြမ်းခင်း Worm'၊ 'Oriental Armyworm'၊ 'ဆန်နားဖြတ်တောက်တတ်သောကျိုင်းကောင်'
Mythimna separata, 'မြောက်ပိုင်းကြည်းတပ်ကောင်' ။
မြောက်ပိုင်းကြည်းတပ်ကောင်မှစိမ်းသောလောင်းလောင်းများသည်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိအစက်အပြောက်များကိုစုတ်ပြဲထားသည်။ သို့သော်သူတို့၏နောက်ကျောတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအရောင်နှစ်မျိုးနှင့်အညိုရောင်ခေါင်းရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံသည်အတောင်ပံများတစ်လျှောက်အဝါရောင်ရောင်နေပြီးမီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကိုတရုတ်၊ ဂျပန်၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ သီရိလင်္ကာ၊ နယူးဇီလန်၊ သြစတြေးလျနှင့်ပစိဖိတ်ကျွန်းများတို့တွင်တွေ့ရသည်။
Spodoptera eridania၊ 'တောင်ပိုင်းကြည်းတပ်ကောင်'
Spodoptera eridania, 'Southern Armyworm' ။
အနီ - အညိုရောင်ခေါင်းနှင့်အတူမီးခိုးရောင် - အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင် - အစိမ်းရောင်လောင်းများကတောင်ပိုင်းကြက်ကောင်၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ လောင်းလောင်းရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့သည်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်အဖြူရောင်အစင်းများပါသည့်အဝါရောင်အစင်းရှိစစ်တပ်ကောင်ဖြစ်လာသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံများသည်အညိုရောင် forewings နှင့်နောက်အတောင်မှအဖြူရောင်မရှိဘဲအရောင်အဆင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်အမေရိကအလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းနှင့်ကာရေဘီယံတို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များတွင်တွေ့ရသည်။
Spodoptera frugiperda, 'Fall Armyworm' ။ ရင်းမြစ် -
အဝါရောင်အစင်းစစ်တပ်သည်ကျဆုံးနေသောကြည်းကောင်ဟုခေါ်သည်။ အများအားဖြင့်အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တောက်ပသောအဝါရောင်အစင်းနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအဝါရောင်အစင်းများကိုအဖြူရောင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်အခြားစစ်တပ်တီကောင်များထက် ပိုမို၍ ဆံပင်ပုံပေါက်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံသည်မဲမှောင်နေသည့်ရှေ့မှောက်နှင့်နောက်အတောင်တစ်ချောင်းစီရှိသည်။ အထီးများသည်အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ပုံစံပြုလေ့ရှိသည်။ ကျဆုံးသောစစ်တပ်တီကောင်ကိုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်မြောက်အမေရိကနှင့်အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်အမေရိကတွင်တွေ့ရသည်။
ဒါဟာအစဖြစ်လာသည် အဓိကခြိမ်းခြောက်မှု တိုက်ကြီးရှိငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပြcompoundsနာများကိုပိုဆိုးစေသည့်အာဖရိကရှိစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်ဖြစ်သည်။
Spodoptera exigua, 'Beet Armyworm' ။
ဤအစိမ်းရောင် - အညိုရောင်ခူကောင်များသည်ရှည်လျား။ မှောင်မိုက်သောအစင်းများရှိပြီးသူတို့၏အပေါ်ဘက်တွင်ရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံသည်အနီရောင် - အညိုရောင်ညိုညိုညိုရောင်များနှင့်ဆင်စွယ်ရောင်သို့မဟုတ်နောက်ဘက်တောင်ပံများပါသောအရောင်တောက်နေသောအညိုရောင်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးပိုးမွှားအဖြစ်လူသိများသော beet armyworm သည်အာရှအရှေ့တောင်ပိုင်းမှအစပြုခဲ့သော်လည်းကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
Spodoptera mauritia, 'Lawn Armyworm' ။ ရင်းမြစ် -
မြက်ခင်းကြက်ဆူကောင်သည်ဖြူဖွေးသောစိမ်းလန်းသောပိုးလောင်းများအနေဖြင့်စတင်သည်။ သို့သော်အဖြူနှင့်အညိုရောင်အစင်းပါသည့်အစိမ်းရောင်ကျောကိုစိမ်းလန်းစိုပြေစေသည်။ စက်ဝိုင်းတစ်ဝက်အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များကိုအဖြူရောင်အဖြူရောင်ကသူတို့နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံများသည်မီးခိုးရောင် - အညိုရောင်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်သောပုံစံများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပစိဖိတ်ကျွန်းများတစ်လျှောက်သာမကပင်လယ်နီမှအိန္ဒိယအထိနှင့်မလေးကျွန်းဆွယ်တစ်လျှောက်သြစတြေးလျအထိကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသည်။
Spodoptera exempta, 'African Armyworm' ။ ရင်းမြစ် -
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ၊ အာဖရိကစစ်တပ်ပိုးမွှားဟောင်းများသည်aloneရိယာတစ်ခုတည်းတွင်ဖြစ်စေ၊ များပြားသည်ဖြစ်စေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များရှိသည်။ တစ် ဦး တည်းနေသောသူများသည်အစိမ်းရောင်ရှိပြီးအများအားဖြင့်လူအများစုတွင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်မီးခိုးရောင်ရှိကြသည်။ Striping သည်အခြားစစ်တပ်ပိုးကောင်မျိုးစိတ်များကဲ့သို့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွင်မီးခိုးရောင် - အညိုရောင်အရောင်ဖျော့ရောင်ရှိပြီးရှေ့တွင်အဖြူရောင်သွယ်တန်းထားသောမြင်သာသောသွေးကြောများရှိသည်။ ၎င်းကိုအာဖရိကနှင့်အာရှရှိအများအားဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံသည်ဥများကိုဥလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် oblong ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးအရွက်များသို့မဟုတ်မြက်ပင်များအောက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ ကြက်ဥ၏တည်နေရာနှင့်အရေအတွက်သည်မျိုးစိတ်အလိုက်ကွဲပြားသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ဥ ၃၀ မှ ၈၀ ကြားတွင်ရှိသည်။
ဥဥများပေါက်သည့်အခါငယ်ရွယ်သောလောင်းငယ်များသည်အားလုံးသောမီးခိုးရောင်စိမ်းလန်းသောအရောင်ရှိပြီး၎င်းတို့အားမျိုးစိတ်ပေါ် မူတည်၍ အရောင်များကိုပိုမိုမှောင်မိုက်။ မြင်သာသောအဖြူရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် instars ဟုခေါ်သော larval အဆင့်ခြောက်ဆင့်မှတစ်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သောစစ်လက်နက်များ၌အင်အား ၉ ခုအထိရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားစစ်တပ်တီကောင်များတွင်အင်စတာ ၆ ခုရှိသည်။ ဤပိုးလောင်းအဆင့်သည်ပိုးမွှားများသည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအများဆုံးထိခိုက်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအင်စတီကျူးရှင်းများနိဂုံးချုပ်သောအခါလောင်းများသည်မြေဆီလွှာထဲသို့ ၀ င်လာပြီးရုပ်သေးရုပ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မျိုးဆက်အလိုက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သော်လည်း ၁၂-၁၄ ရက်အကြာတွင်စစ်တပ်ပိုးမွှားအများစုသည်ပိုးဖလံများဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးသည်မျိုးစိတ်အလိုက်ကွဲပြားသော်လည်းကြက်ဥမှသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံအထိရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၉၀ အတွင်းရှိသည်။ အများစုမှာပိုးလောင်းအဆင့်တွင်သုံးလေ့ရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံသည်များသောအားဖြင့် ၉-၁၄ ရက်အတွင်းသာနေထိုင်ပြီးထိုအချိန်အတွင်းဥ ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ အတွင်းဥများခွာနိုင်ပြီးလျင်မြန်စွာပြန့်ပွား။ ဖျက်ဆီးတတ်သောပိုးမွှားဖြစ်လာသည်။
ဒီသံသရာအများစုကိုနွေ ဦး နဲ့နွေရာသီမှာကျမှာဖြစ်ပြီးကျဆုံးသွားတဲ့ Armyworm အတွက်ဖြစ်တယ်။ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ဘဝသံသရာအနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မည်။
ခူကောင်များကဲ့သို့စစ်တပ်ပိုးကောင်များသည်စားသည့်နေရာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့နှစ်သက်သောအစားအစာများမှမွေးဖွားလာပြီး၎င်းကိုလောင်ကျွမ်းပြီးအခြားအပင်များသို့ရွေ့သွားလိမ့်မည်။ လောင်းလောင်းလောင်းလောင်းအရွယ်အစားကြီးမားသောလူ ဦး ရေတွင်၎င်းတို့သည်စစ်တပ်ငယ်လေးတစ်စင်းနှင့်တူသည်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးအိမ်ရှင်နေရာမှစီစဉ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့်နောက်တစ်စီးစားနပ်ရိက္ခာအပင်များကိုရှေ့သို့တွားသွားနေကြသည်။
စစ်တပ်ပိုးကောင်အများစုသည်မြေဆီလွှာတွင်ဆောင်းရာသီမဝင်ဘဲဆောင်းရာသီအတွက်ပူနွေးသောရာသီဥတုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ မြောက်အမေရိကမျိုးစိတ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖလော်ရီဒါ၊ အရှေ့တောင်ပိုင်း (သို့) အခြားနှင်းခဲကင်းသောဒေသများတွင်ဆောင်းတွင်းရှင်သန်ကြသည်။ သို့သော်ထိုမျိုးစိတ်အနည်းငယ်အတွက်ဆောင်းရာသီတွင်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျောင်းသားများနေထိုင်ကြသည်။
Common Army Worm: ဂျုံ၊ မုယောစပါး၊ ကြံ၊ ပြောင်း၊ နှံစားပြောင်း၊ အုတ်စပါး၊ ဆန်နှင့်ကောက်စသည့် Gramineae မြက်မျိုးစိတ်များစွာရှိသည်။ ငရုတ်သီး၊ ပုစွန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပဲ၊ ကြက်သွန်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ဆလတ်၊ မုန်လာဥနှင့်သခွားသီးကဲ့သို့သောအခြားသီးနှံများကိုအစာကျွေးနိုင်သည်။
မြောက်ပိုင်းကြည်းတပ်ကောင်: များသောအားဖြင့်ပြောင်း၊ နှံစားပြောင်းနှင့်ဆန်ကိုစားသုံးလေ့ရှိသည်။ အခြား Gramineae မျိုးစိတ်များကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
တောင်ပိုင်းကြည်းတပ်တီကောင်: တောင်ပိုင်းကြည်းတပ်ကောင်တွင်ဥယျာဉ်ခြံ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ ထောပတ်သီး၊ မုန်လာဥ၊ အာလူး၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကတ္တီပါ၊ ။ ဝက်နှင့် pokeweed သည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ပေါင်းပင်များကိုစားကြသည်။
Fall Army Worm: 60 ကျော်နှင့်အပင် 80 ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးပေါင်းအထိဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားများထဲတွင် forage နှင့်သီးနှံမြက်, ပြောင်းဖူး, Alfafa ဟာ, ပဲပုပ်, ဝါဂွမ်းနှင့်အများဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများကိုပါဝင်သည်။
Beet Army တီကောင်: ဝါဂွမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ဂျုံနှင့်ပြောင်းကဲ့သို့သောသီးနှံအစရှိသောအပင်များ၊ ပိုက်ဆန်၊ ပေါင်းပင်အမျိုးမျိုး။
မြကြည်းတပ်တီကောင်: ဆန်သည်ဤပိုးမွှားအတွက်အကောင်းဆုံးသောသီးနှံဖြစ်သော်လည်းအာဟာရ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ၀ ံပုလွေ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ မုန်ညင်း၊ မုန်ညင်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ မုန်လာပင်၊ ကြံနှင့်မြက်မြက်အပါအ ၀ င်မြက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းစားသုံးကြောင်းသိရသည်။
အာဖရိကကြည်းတပ် သီးသန့်နီးပါးနီးပါးဖြစ်သောအာဖရိကကြည်းတပ်မှပိုးကောင်သည်သီးနှံ၊ ကျက်စားရာနှင့်မြက်ခင်းပြင်များကိုကျွေးမွေးသည်။ ပြောင်းဖူး၊ နှံစားပြောင်း၊ ဆန်၊ ဂျုံနှင့် oat ပျိုးပင်များအပါအဝင်သီးနှံသီးနှံအများစုကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရလောင်းနှစ်ကောင်သည် (၁၀) ရက်ကြာပြောင်းပင်တစ်ပင်လုံးကိုသူတို့ဘာသာစားနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းကြောင့်ဤပိုးမွှားများသည်ပြောင်းဖူးသီးနှံများအတွက်အထူးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
Armworm ပျက်စီးမှုသည်ကိစ္စရပ်အားလုံးနီးပါးတွင်၎င်းတို့နှစ်သက်သောအစားအစာတွင်ကျယ်သည်။ သူတို့သည်မြက်များပေါ်တွင်အရွက်များ၊ အစာသီးနှံများအပေါ်ပြုမူကြသည်၊ ပြောင်းဖူး၊ သစ်သီး၊ ဖရဲသီးကဲ့သို့သောကောက်ပဲသီးနှံများတွင်၎င်းတို့သည်အစာစားရန်အတွက်မြက်ပင်များသို့မဟုတ်အသီးများအတွင်းသို့သွတ်သွင်းနိုင်သည်။ ဒီပိုးမွှားအလွန်ပျက်စီး!
စစ်တပ်ပိုးကောင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပထမကာကွယ်ရေးမှာ၎င်းတို့အားအပင်များမှလက်ဖြင့်ကောက်ယူရန်နှင့်နွေးထွေးသောဆပ်ပြာရေတစ်ပုံးထဲသို့နစ်မြှုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်စစ်တပ်ပိုးကောင်များကိုမည်သို့သတ်ရမည့်နည်းများကိုသင်တောင်းခံလိမ့်မည်။ သင်သူတို့ကိုသတ်ဖြတ်နိုင်ရုံသာမကပြန်လာခြင်းကိုတားဆီးရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ရွေးစရာအချို့ကိုသွားကြစို့။
စစ်တပ်ပိုးကောင်များထိန်းချုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Bacillus thuringiensis var ။ kurstaki လည်း BT အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မှုန်ရေမွှားအတွက်အရည်ပုံသေနည်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် Monterey BT နှင့်အမှုန့်ဗားရှင်း၌တည်၏ ဥယျာဉ်မြေမှုန့် , ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးကောင်အဆိပ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စစ်တပ်ပိုးမွှားများသာမကအခြားခူကောင်များအတွက်လည်းထိရောက်မှုရှိသည် ဂေါ်ဖီထုပ်ကွင်းဆက် , ဂေါ်ဖီထုပ်ပိုးကောင်များ , ခရမ်းချဉ်သီး hornworms နှင့် ဝမ်းရောဂါ အခြားသူများအဖြစ်။
Azadirachtin မှုန်ရေမွှား ကဲ့သို့ Azatrol EC ထို့အပြင် armyworms သတ်ပစ်ရန်မည်သို့တခုတခုအပေါ်မှာရွေးချယ်မှုအဖြစ်အတော်လေးအသုံးဝင်ပါသည်။ Azadirachtin, သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်နေသောတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း ဆီယူပါ ထိရောက်တဲ့စွမ်းအားရှိမယ်ဆိုရင်ကြွက်များ၏ကြက်ဥများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးပိုးလောင်းများကိုလည်းသေစေလိမ့်မယ်။
အခြား ဟော်ရီကာချာဆီ ကဲ့သို့ ဆီယူပါ ထို့အပြင်စစ်တပ်ပိုးကောင်များကိုအလွန်ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်၊ သို့သော် Azatrol EC ကဲ့သို့သောစင်ကြယ်သောပုံစံများထက် azadirachtin ပမာဏနည်းသည်။
TO သို့ spinosad မှုန်ရေမွှား ကဲ့သို့ Monterey ဥယျာဉ်အင်းဆက်ပိုးမှုတ်ဆေး ငါဖော်ပြထားတဲ့တခြားအကြံပြုချက်တွေလိုပဲထိရောက်မှုရှိတယ်၊ BT နဲ့ azadirachtin လိုပဲကျိုင်းကောင်မိသားစုတစ်ခုလုံးအပါအ ၀ င်ပိုးမွှားမျိုးစုံကိုတိုက်ဖျက်တယ်၊ ကညွတ်ပိုးတောင်မာများ နှင့် အာလူး bug များ ။
ထိုသားကောင်များထဲတွင်အထူးသဖြင့်ငှက်များရှိသည် ကျီးကန်းများ၊ ။ အချို့မျိုးကွဲ ဖားများနှင့်ဘားပြုပ်များ ထို့အပြင်စစ်တပ်ပိုးကောင်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပိုးဖလံပျော်ရွှင်စွာလောင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျမြက်၌, အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့မြက်ခင်းသို့မဟုတ်စပါးကိုကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်စစ်တပ်ပိုးကောင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံမေးမြန်းခဲ့ကြလျှင်, ဤသဘာဝသဘာဝသားကောင်တွေကိုဆွဲဆောင်တလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောငှက်များသည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုကောက်ယူနိုင်သကဲ့သို့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုထက်ပြproblemနာပိုများလာပါကသင်၏အပင်များပေါ်တွင်ငှက်ကွန်ယက်ကိုတင်ထားရန်ပြင်ဆင်ထားပါ။
အကျိုးရှိသော nematodes မြေဆီလွှာအတွင်းမှကူညီလိမ့်မယ်။ ဤအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်နေထိုင်သူများသည်သူတို့၏လောင်းခွေးပုံစံတွင်လောင်းလောင်းများကိုပျော်ရွှင်စွာပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည်။ သူတို့စိုစွတ်သောမဟုတ်လျှင်သူတို့မြေဆီလွှာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအဖြစ်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, မြေဆီလွှာ၏ထိပ်ပေါ်မှာနေသောသူတို့သည်လည်း pupate မှဆင်း burrowing စေမည့်လောင်းတိုက်ခိုက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
အားပေးဖို့မမေ့ပါနှင့် ကပ်ပါးနကျယ်ကောင် သင်၏ခြံ၌နေထိုင်ရန်။ ဤသေးငယ်သောနကျယ်ကောင်များသည်လူသားများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့ကြီးမားသောတိရိစ္ဆာန်များကိုမထိခိုက်စေပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုပုံမှန်အားဖြင့်သားကောင်များ၏အတွင်းပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ထိပ်ပေါ်တွင်တင်ထားလေ့ရှိသည်။ ဥဥများပေါက်လာသည်နှင့်အမျှလူငယ်နကျယ်ကောင်များသည်လောင်းများပေါ်တွင်စားသောက်ပြီးသတ်ပစ်ကြသည်။
ဒါ့အပြင် မင်္ဂလာပါ နှင့် ရက်တွေ အသုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည်စစ်တပ်ပိုးကောင်များ၏ဥများကိုရှာတွေ့သောအခါ၎င်းတို့စားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်ပျားများကဲ့သို့သင်၏အပင်များကို ၀ တ်မှုန်ကူးရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း၎င်းတို့သည် ၀ တ်မှုန်ကူးသူအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရသည်။
လူသိနည်းသောလူသိများသည့်စစ်တပ်ပိုးကောင်များ၏အသားစား မြေပြင်ပိုးတောင်မာ ယေဘူယျအားဖြင့်ကျိုင်းကောင်အမျိုးအစားများကိုစားသောကြောင့်အကျိုးရှိသည့်အင်းဆက်ပိုးမွှားဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် Calosoma genus မှဖြစ်သည်။ ကပ်ပါးကောင်နို့စို့သူငယ်များ၊ ladybugs နှင့် lacewings များနှင့်မတူဘဲမြေပြင်ပိုးတောင်မာများသည်များသောအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်စစ်တပ်ပိုးကောင်များနှင့်အခြားကျိုင်းကောင်အမျိုးအစားလောင်းများရှိသောဒေသများသို့သဘာဝအလျောက်ရွေ့ပြောင်းသွားသည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွင်သင်၏ခြံသည်အကျိုးရှိသောသားကောင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ကိုသေချာစေခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော lacewings နှင့်ကဲ့သို့သော ladybugs ဆွဲဆောင်သောအပင်များစိုက်ပျိုး ဇီယာစေ့, စမုန်နက်, နံနံ, yarrow, marigold နှင့်စမုန်နက် သင့်ရဲ့ခြံထဲမှာအဲဒီအံ့ဖွယ်အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့။ ဤရွေ့ကားအများစုသည်လည်းအချို့သောမတော်မတရား ၀ န်ကောင်များကိုလည်းဆွဲလိမ့်မည် tansy, သံပုရာဗာလစံစေးနှင့် parsley ။ ရည်မှန်းချက်မှာအကျိုးရှိသောသားကောင်များကိုသင်၏ဥများနှင့်ရံဖန်ရံခါပိုးမွှားများသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည် aphids ), သူတို့သည်အမြဲတမ်းစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးရှိသည်သေချာစေရန်သူတို့ကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးနေရန်အားပေးလိမ့်မည်။
သငျသညျအရွယ်ရောက်စစ်တပ်တီကောင်ပိုးရွသင်၏အပင်များထံမှစောင့်ရှောက်နိုင်လျှင်, သူတို့ကသူတို့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဥမတင်နိုင်ပါ။ ဒီကိုအသုံးပြု။ မြက်ပေါ်တွင်အဖြစ်ထိရောက်စွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးနေစဉ် ရေပေါ်အတန်းအဖုံး ကဲ့သို့ ရိတ်သိမ်း - အစောင့် သင့်ရဲ့အခြားအစားအစာအပင်များကသူတို့ကိုစစ်တပ်ပိုးမွှားများအပါအ ၀ င်ပိုးမွှားများစွာမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
၎င်းသည်များသောအားဖြင့်စစ်တပ်ပိုးကောင်များကိုစိတ်တိုစေသော၊ diatomaceous မြေကြီးတပြင် သင်၏အပင်၏အရွက်များနှင့်ပင်စည်များကစစ်တပ်ပိုးမွှားများကိုအခြားအစားအစာအရင်းအမြစ်ရှာရန်အားပေးလိမ့်မည်။ Diatomaceous earth သည်လူနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း၊
ဖြေ။ အညိုရောင်အားလုံးသည်စစ်တပ်ပိုးမွှားများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်အပူနှင့်ဆက်စပ်သောသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏မြက်ခင်းပြင်၌ညိုညိုညိုအညစ်အကြေးများကြီးကြီးမားမားတွေ့နေသည်ဆိုလျှင်နံနက်စောစောသို့မဟုတ်မိုus်းမလင်းမှီအပြီး၌အပြင်ဘက်သို့သွားကာကြည်းပိုးလောင်းလောင်းသို့မဟုတ်ပိုးဖလံကိုရှာဖွေပါ။ သငျသညျတစ်ခုခုလက္ခဏာများကိုမြင်ရလျှင်, အချို့သော BT နှင့်အတူမြက်ခင်းကိုမှုတ်ပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ဖို့ကပညာရှိရာရောက်လိမ့်မည်။ မြက်ခင်းပြင်အများစုသည်စစ်တပ်တီကောင်များကျူးကျော်ပြီးနောက်အတော်လေးလျင်မြန်စွာပြန်လာနိုင်သော်လည်းသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖမ်းမိမှသာဖြစ်သည်။
A: ဒါဟာသင်ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်တပ်ပိုးမွှားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်တယ်။ သို့သော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏သဘာဝအစားအစာရင်းမြစ်များရှိသောနေရာများတွင်အများဆုံးတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စပါးစိုက်ပျိုးသောinရိယာ၌နေထိုင်ပါကထိုဒေသရှိစပါးကျွေးသောစစ်တပ်ကောင်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ဖြေ - ပိုးဖလံမျိုးစိတ်အများစုဟာညဘက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကံမကောင်းစွာပဲ, စစ်တပ်ပိုးကောင်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်နေ့အချိန်၌အပင်များ၌အချို့ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်သော်လည်းပိုးမွှားအများစုသည်မိုfrom်းမလင်းမှီ မှစ၍ အရုဏ်တက်ချိန်အထိသို့မဟုတ်အများအားဖြင့်အရိပ်ရသည့်ဒေသများသို့စားသုံးကြသည်။
စစ်တပ်ပိုးကောင်များဥယျာဉ်တော်၌ကြုံတွေ့ရရန်အန္တရာယ်ရှိသောပိုးမွှားဖြစ်ကြပြီး, သူတို့ကထိန်းချုပ်မရလျှင်အမှန်တကယ်ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, မျှော်လင့်ဒီဒီအန္တရာယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့သတင်းအချက်အလက်အများကြီးပေးထားတယျ။ သငျသညျအမြိုးသမီးမြားစစ်တိုက် Worm နှင့်တိုက်ခဲ့ဖူးလျှင်ရှိလျှင်, ဘယ်လို? သူတို့ကိုရှင်းပစ်ရန်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောလှည့်ကွက်များရှိပါသလား။ မင်းရဲ့ပုံပြင်တွေကိုဝေမျှဖို့အခမဲ့ပါ။
အရွက်ပေါ်တွင်ကြီးထွားလာ java fern
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်၌ဆေးလုံး bug များဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ